Adderall ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှောင်ရှားရမည်နည်း တစ်ယောက်တည်း - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
သတင်း ကုမ္ပဏီသတင်း ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ ဆီးဂိမ်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း သတင်း၊ ရပ်ရွာ မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ နှိပ်ပါ
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> Adderall ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ရှောင်ရှားရမည်
မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက်များအစာစားချင်စိတ်၊ ပါးစပ်ခြောက်သွေ့မှုနှင့်အိပ်စက်ခြင်းပြtroubleနာများများသောအားဖြင့်ယာယီဖြစ်သော Adderall ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည်။ သို့သော် Adderall ကိုရေရှည်အသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုကြာရှည်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး Adderall | ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ | ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲ | သတိပေးချက်များ | အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ | ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲ
Adderall သည်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်လှုံ့ဆော်သူဖြစ်သည်။ ၃ နှစ်သားအရွယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသောလူကြီးများနှင့်ကလေးများတွင် ADHD (အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity disorder) ၏ hyperactive-impulsive and inattentive လက္ခဏာများကိုကုသပေးသည်။ ဒါဟာအစသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ် နေ့ခင်းဘက်အိပ်ချင်စိတ်လျော့နည်းစေ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ကလေးသူငယ်များတွင်အသက် ၆ နှစ်နှင့်အထက်ရောဂါများကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါရှိသည်။
Adderall တွင်ပါဝင်သောပါဝင်ပစ္စည်းများမှာအမ်ဖီတမင်းဆားများဖြစ်သည်။ Adderall XR တွင်အမ်ဖက်တမင်းဆားများရောနှောထားသောဖြန့်ချိသည့်ပါးစပ်ဆေးတောင့်တွင်ပါ ၀ င်သည်။ Stimulants အားလုံးလိုလို Adderall မှာဒီဆေးကိုသောက်သုံးခြင်းနှင့်စီမံတဲ့အခါမှာလူနာများနှင့်သူတို့၏စောင့်ရှောက်သူများသိသင့်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊ သတိပေးချက်များ, ကန့်သတ်ချက်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိသည်။
RELATED - Adderall အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Adderall ၏အသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ -
အစာစားချင်စိတ်နည်းခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း Adderall ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်နိုင်သည်။ ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကြောင့်အချို့သောဆေးသမားများက Adderall အားကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမည့်ဆေးညွန်းစာမပါဘဲသတ်မှတ်ထားကြသည်။ သို့သော် Adderall ကို FDA ကကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေသည့်ဆေးဝါးအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအလေးထားသည့်လေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိနိုင်သည်။
Adderall XR လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်စိုးရိမ်မှုကိုအစီရင်ခံခဲ့သည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၈% , သို့သော်ကလေးများသို့မဟုတ်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းမရှိပါ။ စိုးရိမ်စိတ်လည်း Adderall အလွဲသုံးစားမှု၏ဖြစ်နိုင်သောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုသို့မဟုတ်ထိတ်လန့်မှုများသည် Adderall ကုသမှုကိုရပ်ဆိုင်းရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
Adderall သည် ဦး နှောက်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပြောင်းလဲသောကြောင့်၊ ဆေးသည်အကြံပြုထားသောဆေးများနှင့်ပင်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည်:
နှလုံးနှင့်ဆိုင်သောပြproblemsနာများဖြစ်သည့်သွေးပေါင်ချိန်တိုးခြင်းနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းစသည့်နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်းနှင့်ရုတ်တရက်သေဆုံးနိုင်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည့်နှလုံးခုန်နှုန်း (အများအားဖြင့်နှလုံးပြproblemsနာများသို့မဟုတ်နှလုံးချွတ်ယွင်းမှုများရှိသူများ)
Raynaud ရဲ့ရောဂါအပါအဝင်ရံ vasculopathy (သွေးကြောပျက်စီးမှု)
Serotonin Syndrome သို့မဟုတ် Adderall ကဲ့သို့မူးယစ်ဆေးဝါးများကို ဦး နှောက်အတွင်းရှိ serotonin ပမာဏတိုးပွားစေသည့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောရှားပါးသော်လည်းအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။
Adderall ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာသောက်သုံးခြင်းဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုရုတ်တရက်ရပ်တန့်ခြင်းသည်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်တိုးပွားလာခြင်း၊ နှိုးဆွခြင်း၊ နှေးခြင်း၊ Adderall crash လို့ခေါ်တယ်၊ ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေကတကယ်တော့အမ်ဖီတမင်းဆေးတွေထုတ်တဲ့လက္ခဏာတွေပါ။ ကန ဦး ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများပုံမှန်အားဖြင့်စတင် ၂၄ နာရီအတွင်း amphetamines များကိုရပ်တန့်စေပြီး ၃ ပတ်လောက်ကြာသည့်အထိပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်သည်။ ရုပ်သိမ်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ဆေးညွှန်းဆရာ ၀ န်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာရပ်စဲနိုင်သည့်အထိ Adderall ဆေးကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချနိုင်သည်။
အမ်ဖီတမင်းဆေးများသည်လိင်မှုကိစ္စကိုလျော့နည်းစေပြီးခွန်အားဖြစ်စေနိုင်သည် (erectile dysfunction) ။ Adderall XR လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်ပါ ၀ င်သည့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၂% မှ ၄% အထိဤသက်ရောက်မှုနှစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါးများ Ritalin ADHD နှင့် narkcolepsy မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက် (methylphenidate) modafinil နှင့် armodafinil သည် libido ကိုလျော့နည်းစေသည်။ Vyvanse (lisdexamfetamine dimesylate) သည် Adderall ကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖြစ်စေနိုင်သည် Strattera (atomoxetine)၊ အခြား ADHD ဆေး၊ လည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ။
Adderall နှင့် Adderall XR နှစ်ခုလုံးသည် ဇယား II ကိုထိန်းချုပ်ထားတ္ထုများ သူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်မှီခိုဘို့သူတို့ရဲ့အလားအလာကြောင့်ဖြစ်သည်။ Adderall ကိုတစ်ခါတစ်ရံကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသောအထောက်အကူအဖြစ်အသုံးမပြုပါ မူးယစ်ဆေးဝါးလေ့လာခဲ့သည် အထက်တန်းကျောင်းနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများက။ ကြာရှည်စွာ Adderall ဆေးများသည်ရုတ်တရက်ရုပ်သိမ်းသောအခါမှီခိုမှုနှင့်ဆုတ်ခွာမှုလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Adderall ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာများသောအားဖြင့်ယာယီသာဖြစ်ပြီး၊ သူတို့သည်ဆေးကိုပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းနှင့်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကိုရပ်စဲလိုက်သောအခါမကြာခဏပျောက်ကွယ်သွားတတ်သည်။ နှလုံးနှင့်ဆိုင်သောပြproblemsနာများကဲ့သို့ပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့သည်နှလုံးရောဂါနှင့်လေဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သောအသက်အန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရှားပါးသော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးကိုမရပ်တန့်ပါကကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ကြီးထွားမှုဖိနှိပ်မှု၏သက်ရောက်မှုများတစ်သက်တာလုံးတည်တံ့နိုင်သည်။
Adderall ကိုရေရှည်အသုံးပြုခြင်းသည်နှလုံးကြွက်သားရောဂါ (cardiomyopathy)၊ ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒအပြောင်းအလဲသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ နှလုံးနှင့် ဦး နှောက်ပျက်စီးခြင်း ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းက amphetamines အလွဲသုံးစားလုပ်ပေမယ့်ကုထုံးဆေးများမှာအမ်ဖီတမင်းဆေးကိုသောက်သောလူများတွင်ကောင်းစွာလေ့လာထားကြပြီမဟုတ်သူများအတွက်။ အမ်ဖီတမင်းဆေးများကိုရေရှည်ကုထုံးဖြင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်တံခါးပေါက်ဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောစိုးရိမ်မှုအချို့ရှိသည် အထောက်အထားနိဂုံးချုပ်မဟုတ်ပါဘူး ။ Adderall ကိုဆရာ ၀ န်၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်မှန်ကန်သောဆေးညွှန်းဖြင့်သောက်ခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့် ဦး နှောက်ပျက်စီးခြင်း (သို့) ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးခြင်းများကိုမဖြစ်ပေါ်ပါ။
Adderall contraindications & သတိပေးချက်များ
ဆေးညွန်းဆေးများကဲ့သို့ပင် Adderall နှင့် Adderall XR သည်လူတိုင်းအတွက်မသင့်တော်ပါ။ Adderall ရှိအမ်ဖီတမင်းများသည်လက်ရှိသွေးပေါင်ချိန်၊ နှလုံးပြheartနာများနှင့်စိတ်ကြွရောဂါများဖြစ်သည့်စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ် Tourette's syndrome ကဲ့သို့သောလက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်၊ Adderall နှင့် Adderall XR သည်:
amphetamines မှ hypersensitivity သိမှတ်ကြလော့
ဦး နှောက်လှိုင်းစစ်ဆေးခြင်း (ပုံမှန်မဟုတ်သော ဦး နှောက်လှုံ့ဆော်မှုစစ်ဆေးခြင်း) (EEG) ရှိခဲ့ဖူးသောသမိုင်း။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခြေအနေများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ် Tourette syndrome ရောဂါ
Adderall သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုအတွက်အလားအလာရှိသောကြောင့်အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုအတွက်အန္တရာယ်ကိုသယ်ဆောင်သည်။ အများဆုံးအကြံပြုသော Adderall ၏နေ့စဉ်ဆေးပမာဏသည် ADHD အတွက်တစ်နေ့လျှင် ၄၀ မီလီဂရမ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်တစ်နေ့လျှင် ၆၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်း၏လက္ခဏာများသည်ပိုမိုနိမ့်သောဆေးများဖြင့်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဤရောဂါလက္ခဏာများတွင် -
သေစေလောက်သည့်အလွန်အကျွံသောက်မှုကိုမကြာခဏတက်ခြင်းနှင့်မေ့မြောခြင်းတို့ကရှေ့ပြေးသည်။ အလွန်အကျွံသောက်ရန်သံသယဖြစ်ပါကအဆိပ် helpline သို့ဖုန်းခေါ်ပါသို့မဟုတ်အရေးပေါ်ခန်းသို့သွားပါ။
Adderall သည်အသက် ၃ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်ကြားကလေးငယ်များအတွက် ADHD ကိုကုသရန်နှင့် ၆ နှစ်အထက်ကလေးငယ်များအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက် FDA ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ Adderall XR သည်အသက် ၆ နှစ်နှင့်အထက်ကလေးများအတွက်သာဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်အမ်ဖီတမင်းဆေး၏ကလေးအသုံးပြုမှု၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကောင်းစွာလေ့လာထားခြင်းမရှိသေးပါ။
Adderall ၏သိသာထင်ရှားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာကလေးများ၏ကြီးထွားမှုဖိနှိပ်မှုဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Adderall ကိုသောက်သောကလေးများသည်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့နည်းနိုင်သည် အခြားကလေးများ ။ ကြီးထွားမှုနောက်ကျခြင်းသည် Adderall သည်ကလေးများအားရပ်တန့်စေနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Adderall ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်လုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝမသတ်မှတ်ရသေးသော်လည်း၊ အကြောင်းမရှိ မွေးကင်းစတွင်မွေးဖွားခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့်အမ်ဖီတမင်းဆေးဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာများ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသောသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ရှိရန်စဉ်းစားနေသည့်အမျိုးသမီးများသည် Adderall ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ကာလအတွင်းအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်များအကြောင်းဆွေးနွေးသင့်သည်။ Adderall (သို့) Adderall XR သောက်သောကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများသည်ဤပါ ၀ င်မှုကိုရွေးချယ်နိုင်သည် စိတ်ရောဂါကုသမှုများအတွက်အမျိုးသားကိုယ်ဝန် Registry ကိုယ်ဝန်အပေါ် Adderall ရဲ့သက်ရောက်မှုကိုခြေရာခံကူညီရန်။
သူနာပြုအမျိုးသမီးများ Adderall သို့မဟုတ် Adderall XR ကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည် နို့တိုက်နေစဉ်။ Adderall ရှိအမ်ဖီတမင်းဆေးများကိုမည်သည့်နေရာမှမဆိုနို့ရည်ထဲတွင်တွေ့နိုင်သည် ၂% မှ ၁၄% ခေါ်ဆောင်သွား၏။ သူနာပြုကလေးငယ်များအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိသေးသော်လည်းမွေးကင်းစကလေးငယ်သည်ပြင်းထန်သောနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသို့မဟုတ်အခြားဆိုးကျိုးများခံစားရနိုင်သည်။
Adderall ကိုအသက် ၆၅ နှစ်အထက်များတွင်အသုံးပြုခြင်းကိုလေ့လာခြင်းမရှိသေးပါ။
Adderall interaction က
Adderall တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိပြီးလူနာများသို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်သူများသည် Adderall ကိုမသောက်သုံးမီနှင့်မအုပ်ချုပ်မီပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။
Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) - နိဒါန်း - MAO inhibitors များသည်စိတ်ကျဝေဒနာကိုကုသသောဆေးညွှန်းဆေးများမိသားစု (isocarboxazid, tranylcypromine နှင့် ဖင်နို ), ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှု ( လွိုင်ကော် သို့မဟုတ်တီဒီစီဒီလ်)၊ procarbazine ), ပါကင်ဆန်ရောဂါ ( selegiline နှင့် Safinamide), ဒါမှမဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်အတွက်အသုံးပြုကြသည် ( methylene အပြာ ) ။ Adderall သငျ့သညျ ဘယ်တော့မှမ တစ် ဦး MAO inhibitor ၏နောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက် 14 ရက်အတွင်းယူလိမ့်မည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုကသွေးတိုးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အလားအလာရှိခြင်းသို့မဟုတ် serotonin syndrome ရောဂါဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
serotonergic မူးယစ်ဆေးဝါးများ: Serotonergic ဆေးများသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ serotonin ပမာဏကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ Adderall သည် serotonergic ဆေးဖြစ်သည်။ နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော serotonergic ဆေးများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းသည် serotonin Syndrome ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ စိတ်ကြွတည်ငြိမ်စေသော၊ အခြားစိတ်ကြွဆေး၊ opioids၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဆေးဝါးများ၊ ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆေးဝါးများ၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသသောဆေးဝါးများပါဝင်သည်။ ဤဆေးအချို့သည် Adderall နှင့်ပေါင်းစပ်ပါကအတက်အကျပိုများနိုင်သည်။
စိတ်ကြွဆေး: Adderall ရှိ amphetamines များကိုစိတ်ကြွဆေးများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ သူတို့သည် ဦး နှောက်ကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ သွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ခြင်းစသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ Adderall ကိုအခြားစိတ်ကြွဆေးများဖြစ်သောကဖိန်း၊ အမ်ဖီတမင်း၊ နှာစေးစိတ္တဆေး၊ bronchodilators နှင့်အစာစားချင်စိတ်ဖိအားများကဲ့သို့သောပေါင်းစပ်ဆေးများသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။
စာနာမှုလက္ခဏာ: Adderall ရှိ amphetamines များသည် sympathomimetic ဆေးများဖြစ်ပြီး၊ သွေးပေါင်ချိန်၊ နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်ချွေးထွက်ခြင်းများကိုထိန်းချုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည့်စာနာအာရုံကြောများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ Adderall ကိုအခြားစိတ်ကြွဆေးပြားရောဂါ၊ အခြား amphetamines၊ decongestants နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေသောဆေးဝါးများ (phentermine, phendimetrazine, diethylpropion နှင့် benzphetamine အပါအ ၀ င်) ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ဆန့်ကျင် ) နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတိုးများလာနိုင်သည်။
Tricyclic စိတ်ကျဆေးများ: Tricyclic စိတ်ကျဆေးများသည်ပြင်းအားကိုတိုးစေနိုင်သည် dextroamphetamine ဦး နှောက်ထဲမှာနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ၏အန္တရာယ်ကိုမြှင့်တင်။
သွေးတိုးဆေးဝါးများ (သွေးတိုး) Adderall ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာမြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်ဖြစ်သောကြောင့် Adderall သည်သွေးပေါင်ချိန်လျှော့ချသည့်ဆေးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Glaucoma ဆေးများ : Adderall ရှိအမ်ဖီတမင်းဆေးများသည်မျက်စိအတွင်းဖိအားကိုမြင့်တက်စေပြီးဂလူးကူမာဆေးဝါးများ၏ကောင်းကျိုးများကိုလျော့နည်းစေသည်။
Adrenergic blockers: တစ်ခါတစ်ရံ alpha blockers နှင့် beta blockers ဟုခေါ်သော adrenergic blockers များသည်နှလုံးနှင့်သွေးကြောများရှိကြွက်သားများသို့အာရုံကြောအချက်ပြမှုများကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည်။ ၎င်းတို့သည်မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်၊ ရင်ဘတ်နာခြင်းနှင့်မမှန်သည့်နှလုံးခုန်ခြင်းတို့ကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။ Adderall ရှိအမ်ဖီတမင်းဆေးသည်ဤဆေးဝါးများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတန်ပြန်နိုင်ပြီး ၄ င်းတို့၏အရေးပါသောအသက်ကယ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
CYP2D6 inhibitors: CYP2D6 inhibitors ဟုခေါ်သောဆေးအမျိုးအစားများသည် Adderall ကိုဖြိုခွဲရန်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အသုံးပြုသည့်အသည်းအင်ဇိုင်း (CYP2D6) ကိုပိတ်ဆို့သည်။ အများဆုံးစွမ်းအားအရှိဆုံးမှာ serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆေးဝါးများနှင့် quinidine တို့ပါဝင်သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များသည်ဤဆေးဝါးများကိုကောင်းစွာတတ်မြောက်ထားကြသောကြောင့်ဆေးညွှန်းရယူချိန်တွင်မည်သည့်ဆေးဝါးများသောက်သုံးနေကြောင်းဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးနှင့်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူများကိုအမြဲတမ်းပြောပါ။
အေးဂျင့်များ : အစာအိမ်အက်ဆစ်သို့မဟုတ်ဆီးအက်စစ်တိုးပွားစေသည့်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်အစားအစာများသည် Adderall ၏သွေးထဲတွင်ပါဝင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်မဟုတ်သော်လည်းအက်ဆစ်အက်စစ်သည် Adderall ကိုကုထုံးအနေဖြင့်ထိရောက်မှုနည်းစေနိုင်သည်။
Alkalinizing အေးဂျင့်များ : အစာအိမ်အက်ဆစ်သို့မဟုတ်ဆီးလမ်းကြောင်းအက်စစ်လျော့နည်းစေသောဆေးများသည် Adderall ၏သွေးထဲ၌အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးပွားစေပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ Adderall ကိုသောက်သည့်အခါအချို့သော alkaline များဆေးများဖြစ်သည့် antacids၊ thiazides နှင့် urine alkalinizing agent များကိုရှောင်သင့်သည်။
ဤသည် Adderall နှင့်အတူဖြစ်နိုင်သမျှမူးယစ်ဆေးဝါး interaction က၏စာရင်းအပြည့်အစုံဖြစ်နိုင်သည်။
Adderall သောက်သူများသည်များသောအားဖြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအထူးသဖြင့်အစာစားချင်စိတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပါးစပ်ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ သို့သော် ပို၍ စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်းများသောအားဖြင့်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်းသို့မဟုတ်နှလုံးခုန်မြန်သောလူနာများသို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်သူများကဲ့သို့သောရှားပါးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသည်။ အကြံပြုချက်အနည်းငယ်ကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
1. ညွှန်ကြားအဖြစ် Adderall ယူပါ
သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းဆေးသောက်ပြီးဆေးဝါးလမ်းညွှန်သို့မဟုတ်ဆေးနှင့်အတူပါသည့်လူနာ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ပါ။ အများဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်အတွက် Adderall ကိုနေ့စဉ်ညွှန်ကြားခြင်းမရှိပါကနေ့စဉ်ယူပါ။ Adderall ကိုအစားအစာနှင့်မပါဘဲစားနိုင်သည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သော citrus ဖျော်ရည်အဖြစ်အစာအိမ်အက်ဆစ်တိုးမြှင့်ကြောင်းအစားအစာများ, ၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချ, မူးယစ်ဆေးဝါး၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စုပ်ယူမှုကိုလျော့ကျစေနိုင်သည်။ အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ လေ့လာခြင်းစသည့်အခြားဆေးရည်အတွက်ဆေးကိုမသောက်ပါနှင့်။
2. Adderall ၏ပထမဆုံးဆေးကိုနံနက်ယံ၌နှိုးပြီးနောက်သောက်ပါ
ပထမဆုံး Adderall ဆေးကိုနံနက်ယံ၌နိုးပြီးသောက်သင့်သည်။ Adderall XR ကိုနံနက်ယံ၌သာသောက်သင့်သည်။
3. Adderall နောက်ကျသောဆေးကိုမသောက်ပါနှင့်
Adderall သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အိပ်ငိုက်နေခြင်းမှကာကွယ်ရန်အတွက်နေ့ခင်းပိုင်းသို့မဟုတ်ညနေပိုင်းများတွင်ဆေးများသောက်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ နေ့လည်ပိုင်းတွင် Adderall XR ကိုမသောက်သင့်ပါ။
စိတ်ရောဂါအခြေအနေများ, အထူးသဖြင့် schizophrenia, စိတ်ကြွရောဂါ, သို့မဟုတ် Tourette ရဲ့ရောဂါ
ကဖင်းဓာတ်နှင့်နှာစေးဆေးထိုးခြင်းကဲ့သို့သောအခြားလှုံ့ဆော်သူများသည် Adderall ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုပိုမိုဆိုးဝါးစေသဖြင့်ရှေးရိုးစွဲအသုံးပြုပါ။
၆။ သန္ဓေတားဆေးများနှင့်အခြား alkalinizing agent များကိုရှောင်ပါ
အစာအိမ်သို့မဟုတ်ဆီးအက်စစ်လျှော့ချသောတ္ထုများ Adderall ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ အသုံးများသော alkalinizing agent များသည် antacids များဖြစ်သည်။ Adderall ကိုယူစဉ်ကသူတို့ကိုလုံး ၀ ရှောင်ရှားသင့်သည်။
အိပ်မပျော်ခြင်းသည် Adderall ၏အသုံးများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမ်ဖီတမင်းဖြင့်ပြုလုပ်သောအိပ်စက်ခြင်းကိုကျော်လွှားရန်စဉ်းစားရမည့်နယ်ပယ်တစ်ခုမှာအိပ်စက်ခြင်းသန့်ရှင်းရေးဖြစ်သည်။ ညအိပ်ချိန်တစ်နာရီလျှင်အိပ်ရာဝင်ချိန်၊ အိပ်ရာဝင်ချိန်မတိုင်မီအနားယူခြင်း၊ အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်စေရန်၊ အိပ်ရာမ ၀ င်မီချက်ချင်းစက်ကိရိယာများမှအနားယူခြင်း၊ အဘယ်အရာကိုအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ခြေရာခံရန်။
Adderall ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများစွာပြaနာဖြစ်လာသည် အကြံပြုသည် ယူပြီး ဆေးအားလပ်ရက် ဆေးကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သောအခါသို့မဟုတ်ဆေးကိုရက်အနည်းငယ်၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လအနည်းငယ်အထိလျှော့ချသောအခါ။ သို့သျောလညျး, ရှေး ဦး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်ရယူပါ။ အချို့သောသူများအတွက်ဆေးဝါးအားလပ်ရက်သောက်ခြင်းသည်မသင့်တော်ပါ။
XR Adderall , Epocrates
သတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ် Adderall ဆေးပညာအမေရိကန်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
သတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ် Adderall XR ဆေးပညာအမေရိကန်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
အမ်ဖီတမင်း aspartate monohydrate / amphetamine sulfate / dextroamphetamine saccharate / dextroamphetamine sulfate - မူးယစ်ဆေးဝါးအကျဉ်းချုပ် , သတ်မှတ်သူရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိုးကားစရာ
Dextroamphetamine-Amphetamine , StatPearls
ADHD ဆေးမှဆေးဝါးအားလပ်ရက်များ - လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်လေးခုအတွင်းနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံ , အာရုံစူးစိုက်မှု Disorders ၏ဂျာနယ်
လေ့လာနေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု - ပျံ့နှံ့မှု၊ အကျိုးဆက်များနှင့်မူဝါဒအတွက်သက်ရောက်မှုများ၊ ပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှုကုသမှု, ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်မူဝါဒ
narkolepsy အမျိုးအစား ၁ တွင် pitolisant အပေါ်တုန့်ပြန်မှုတုံ့ပြန်မှု - ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ , အိပ်စက်ခြင်း၏သဘာဝနှင့်သိပ္ပံ
ဦး နှောက်နှင့်အပြုအမူအပေါ် amphetamine ကုသမှု၏အလားအလာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ: တစ် ဦး ကပြန်လည်သုံးသပ် , မော်လီကျူးစိတ်ရောဂါကုသမှု
atomoxetine ကုသမှုနှင့်ဆက်စပ်လိင်နှင့် genitourinary ကုသမှု - ပေါ်ထွက်လာသောဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်း: တစ် ဦး စုပေါင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ , မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
စိတ်ကြွဆေးအသုံးပြုမှုရောဂါ , မိသားစုအလေ့အကျင့်မှတ်စုစာအုပ်
မူးယစ်ဆေးဝါးကို amphetamine-based stimulant ဆေးများဖြင့်ကုသခြင်း။ ပိုမိုနားလည်ရန်အတွက်ခေါ်ဆိုခြင်း , လက်တွေ့အိပ်စက်ခြင်းဆေးပညာဂျာနယ်
ရောဂါစာရင်းဇယား 2021 စားခြင်း
ဆရာဝန်များသည် metformin ကိုဘာကြောင့်မညွှန်းတော့တာလဲ။
ibuprofen ၈၀၀ မီလီဂရမ်ကိုဘယ်နှစ်ကြိမ်သောက်သင့်သလဲ
ကောင်တာပေါ်မှာ zofran ကိုငါ ၀ ယ်နိုင်သလား